WordPress Pagination: Sida loogu daro Pagination gacanta ama Plugins | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/Pagination WordPress: Sida loogu daro Pagination Gacanka ama Plugins
Pagination WordPress: Sida loogu daro Pagination Gacanka ama Plugins
Raadinta hab lagu xakameeyo boggaga WordPress?
Hagaajinta boggaaga bogga waxay kaa caawin kartaa inaad abuurto isticmaale-saaxiibtinimo, degel si fudud loo maro. Si kastaba ha ahaatee, mawduucyo badan oo WordPress ah ma bixiyaan doorashooyin pagination oo faahfaahsan, taas oo macnaheedu yahay inaad xaddidan tahay isbeddelada aad samayn karto.
Nasiib wanaag, waxaa jira siyaabo fudud oo lagu hagaajin karo bogga WordPress. Isticmaalayaal aad u horumarsan waxay ku tiirsanaan karaan koodka gaarka ah, halka isticmaalayaasha caadiga ah ay heli karaan dhowr plugins oo tayo sare leh.
Maqaalkan, waxaan ku dabooli doonaa wax walba oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato bogga WordPress.
Waa maxay Pagination WordPress?
Bogagga WordPress waa habka loo kala qaybiyo liiska boggaga boggaga internetka ama macluumaadka kale ee boggag gaar ah.
Tusaale ahaan, haddii aad haysato 100 qoraallo oo baloog ah, waxaa laga yaabaa inaad dejiso boggaga boggaga si aad u muujiso 10 qoraallada blog ee bog kasta, taas oo u qaybin doonta liiskaaga boostada 10 bog oo leh 10 qoraallo midkiiba.
Booqdayaasha ayaa markaa isticmaali kara badhamada "Next" ama "Previous" si ay ugu dhex maraan boggaga liiska ku qoran. Ama, xaaladaha qaarkood, booqdayaashu waxay arki doonaan liis bogag lambaraysan si ay ugu boodaan bog gaar ah. Tusaale ahaan, bog-gudbintu waxa ay sidan ugu eegtahay dulucda labaatan iyo kow ee caadiga ah:
Tusaalaha bogga WordPress ee mawduuca ugu muhiimsan ee labaatan iyo kow.
Waxa kale oo aad hal bog oo WordPress ah u jebin kartaa bogag badan, taas oo ku caawin karta haddii aad daabacdo nuxur qaab-dheer.
Iyada oo qaar ka mid ah furayaasha koodka ama plugins, waxaad sidoo kale ka heli kartaa xakameyn badan oo ku saabsan sida pagination-ka u shaqeeyo goobtaada, kuwaas oo ah mowduucyo aan ku dabooli doono dambe ee qoraalkan.
Raadinta hab lagu xakameeyo boggaga WordPress? 👀 Halkan ka bilow 🚀Riix halkan Tweet
Waa maxay sababta loo isticmaalo Pagination WordPress?
Waxaa jira 3 sababood oo waaweyn oo ay tahay inaad daryeesho boggaga WordPress:
Hagitaan la hagaajiyay iyo khibrada isticmaalaha
Gurguurashada SEO oo la hagaajiyay
Aynu soo marno.
Hagidda iyo Khibrada Isticmaalaha oo la hagaajiyay
Faa'iidada ugu weyn ee hagaajinta bogga WordPress waa in ay u sahlayso booqdayaashaada inay maraan goobtaada, taas oo u abuureysa khibrad wanaagsan iyaga.
Mawduucyo badan oo WordPress ah ayaa kaliya muujinaya xulashooyinka boggaga xaddidan, taas oo adkeynaysa booqdayaasha inay u socdaan bog kale.
Tusaale ahaan, halkan waxaa ah xulashooyinka boggaga caadiga ah ee mawduuca labaatan iyo kow marka booqde akhriyo bogga koowaad ee qoraallada.
Mawduuca kow iyo labaatanka waxa uu ku siinayaa dookhyada bogag xadidan ee bogga kowaad.
Booqdayaasha waxay u socon karaan bogga u dambeeya (bogga 6 ee tusaalahan) ama bogga xiga (adigoo gujinaya "posts ka hore"), laakiin si toos ah uma socon karaan bogagga 3, 4, ama 5.
Is barbar dhig midaan Behmaster blog, kaas oo bixiya xiriiriyo bogag badan si ay uga caawiyaan booqdayaasha inay gaaraan meesha saxda ah.
The Behmaster balooggu wuxuu bixiyaa xulashooyin bogag badan oo loogu talagalay hagitaan sahlan.
Booqdayaasha waxay helayaan fursado badan marka ay u socdaan bogag qoto dheer, taas oo ka caawisa inay si dhakhso ah hore ugu boodaan ama dib ugu noqdaan bogag kala duwan haddii loo baahdo.
Isticmaalayaashu waxay helayaan doorashooyin pagination badan markay u socdaan boggag qoto dheer.
Isticmaalka pagination waxay sidoo kale noqon kartaa xeelad lagu hagaajinayo waxqabadka boggaaga WordPress iyadoo la xaddidayo qaddarka xogta ee goobtaadu u baahan tahay inay ku shubto bog kasta.
Tusaale ahaan, aan dhahno waxaad haysaa 50 qoraallo oo blog ah. Haddii aad isku daydo inaad ku shubto dhammaan 50ka qoraal ee ku yaal boggaaga ugu muhiimsan ee blog, boggaaga baloogga ayaa laga yaabaa inuu si tartiib ah u soo baxo sababtoo ah taasi waa xog badan.
Si kastaba ha ahaatee, haddii aad isticmaasho pagination si aad u kala qaybiso liiska 5 bog oo midkiiba ka kooban yahay 10, bog kasta wuxuu ku shubmi doonaa si degdeg ah sababtoo ah waxay u baahan tahay oo kaliya inay ku shubto shan meelood meel xogta.
Gurguurto SEO oo la hagaajiyay
Isticmaalka pagination waxay sidoo kale u fududayn kartaa mashiinka raadinta sida Googlebot si ay u gurguurtaan goobtaada adigoo siinaya bots-yadan xiriiriyeyaal badan oo dheeraad ah.
Waa farqi yar, laakiin tweak kasta oo aad samayn karto si aad u wanaajiso gurguurashada goobtaada had iyo jeer waa wax u fiican SEO.
Sida gacanta loogu xakameeyo bogga WordPress
In kasta oo aan ka heli doono qaar ka mid ah plugins pagination-ka WordPress ee ku anfacaya qaybta soo socota, waxa kale oo aad helaysaa qaar ka mid ah sifooyin lagu dhex dhisay si aad ula shaqeyso bogga WordPress. Ama, iyadoo ku xiran heerka aqoontaada, waxaad sidoo kale hagaajin kartaa bogga adoo isticmaalaya koodka gaarka ah.
Aynu ka hadalno ikhtiyaarada ku dhex jira ee ku shaqaynta bogga, annagoo adeegsanayna mawduuca labaatan iyo kow ee caadiga ah tusaale ahaan.
Xakamaynta Immisa shay oo ay ka kooban tahay bog kasta
Sida caadiga ah, WordPress wuxuu tusi doonaa 10 qoraal bog kasta. Markaa haddii aad leedahay 25 qoraal, waxaad yeelan lahayd 3 bog oo wadar ah. 2da bog ee hore waxa ay tusin doonan 10 post midkiiba, boga u dambeeyaa waxa uu tusi doona 5 farood ee soo hadhay.
Haddii aad rabto inaad hagaajiso lambarkan, waad tagi kartaa Dejinta> Akhrinta oo wax ka beddel Bogagga baloogga ayaa muujinaya ugu badnaan qiimaha.
Sida loo beddelo inta posts ee WordPress soo bandhigay bog kasta.
Jebinta Boostada WordPress ama Bogga Bogag badan
Ilaa hadda, waxaan inta badan diirada saarnay inaan u jebino boggaga liiska blog-ka ee boggag badan. Si kastaba ha ahaatee, WordPress sidoo kale wuxuu kuu ogolaanayaa inaad u qaybisid qoraalada shakhsi ahaaneed ama bogag bogag kala duwan, kuwaas oo laga yaabo inay ku caawiyaan xaaladaha qaarkood.
Haddii aad isticmaalayso tifaftiraha xannibaadda WordPress (AKA Gutenberg), waxaad dooran kartaa meesha aad ku darto nasashada bogga adoo isticmaalaya Bogga Fasaxa block.
Sida loogu daro bogga nasashada ee bogga Break block.
Haddii aad isticmaalayso tifaftiraha caadiga ah ee TinyMCE, waxaad dooran kartaa meesha aad ku darto nasashada bogga adigoo isticmaalaya mid ka mid ah labada hab:
Dhig curcurkaaga jiirka meesha aad rabto inaad ku darto jebinta bogga gudaha Visual tab ee editor. Kadib isticmaal kiiboodhka soo socda: Alt + Shift + P.
Gacanta ku dhig jebinta bogga adiga oo ku dhejinaya cutubkan soo socda gudaha Text tab ee tifaftiraha:
Content Marketing 697
Picture It: LGBTQ Representation in Stock Photography ( 26 Sources)